လေယာဉ် အများစု ဟာ အဖြူရောင် ဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း - YOYARLAY Digital Media and News
အဖြူရောင် လေယာဉ်တွေ ဟာ စံသတ်မှတ်ချက် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ (အနောက်တောင်ဘက်ခြမ်းက သူပုန်ထကြွမှုကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက်လား?
မဟုတ်ပါဘူး) ။ ဒီလို တူညီတဲ့ အရောင် ပုံစံ ထားရတာဟာ အကြောင်းပြချက် ကောင်းကောင်းရှိနေပါတယ်။ သိပ္ပံပညာ နဲ့ စီးပွားဆိုင်ရာ အမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ လေယာဉ်ဟာ Lisa Frank Leopard (အရောင်စုံ ကျားသစ်ကွက် ပုံစံ) လိုမျိုး ဖြစ်မနေသင့်တဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အကြောင်းပြချက် များကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆိုးတယ်နော်။
အဓိက အကြောင်းပြချက်က ဘာလဲ? Thermal Science (အပူချိန်နှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ သိပ္ပံပညာ) ဖြစ်ပါတယ်။ MIT Aeronautics and Astronautics ပါမောက္ခ အာရ် ဂျွန် ဟန်းစ်မန်း(R.John Hansman) ရဲ့ပြောကြားချက်အရ ဒီအရောင်က နေရောင်ခြည် ကို ကောင်းဆုံး အလင်းပြန်ပေးနိုင်တယ်၊ လေယာဉ်ရဲ့ လူနေခန်းတွေကို အအေးဓာတ် ရစေတယ်။ (ကန္တာရ ထဲက အဖြူရောင် အဝတ်တွေ ဝတ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက် လိုပေါ့)။
လေယာဉ်ရဲ့ ပလတ်စတစ် အစိတ်အပိုင်းတွေ နဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို နေရောင်ခြည်ကနေ ကာကွယ်ပေးတယ်။ ဆေး အဖြူရောင် က အန္တရာယ် ရှိတဲ့ အပူဖြာထွက်မှု တွေ ကိုလည်းပဲ ကာကွယ်ပေးတယ်လေ။ လေယာဉ် ကို နေရောင်ခြည် ကနေ ကာကွယ်ပေးတယ် လို့ပဲ မှတ်ထားလိုက်ပါ။
ကောင်းကင်ပေါ်မှာဆိုရင် ငှက်တွေဟာလည်း အဖြူရောင် တောက်တောက် လေယာဉ် တစ်စီးကို သဘောပေါက် သတိထားမိတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရတော့ အဖြူရောင် လေယာဉ် တွေဟာ အပြာရောင်လေယာဉ် တွေထက်စာရင် Birds Collision (ငှက်များ ဝင်တိုက်မှု ဖြစ်စဉ်) ပိုပြီး နည်းပါး ပါတယ်တဲ့။ ကြည့်ရတာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အမွှေးပါတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ (ငှက်များ) ဟာ အဖြူရောင် လေယာဉ် တွေကို မြန်ဆန် လွယ်ကူစွာ ရွေးချယ်နိုင်ပုံ ရပါတယ်။
အဖြူရောင် လေယာဉ် တွေ က လူတွေရဲ့ အမြင်အာရုံ ကိုလည်း အကူအညီ ပေးပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ရာ ဝင်တိုက်မှု ဖြစ် ခဲ့တာတောင် မှပဲ အဖြူရောင် ဖြစ်နေရင် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ လူ့မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်ရင် အဖြူရောင်ပေါ်က ထိမိ ခိုက်မိ ဒဏ်ရာ တွေကို လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်လို့ပါ။ နောက်ပြီးတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ လေယာဉ်ရဲ့ ထိခိုက်မှုတွေကို ရှာတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စပဲကိုး။
ဒီ အဖြူရောင် လေယာဉ် ဇာတ်လမ်း မှာ သိပ္ပံပညာက နှစ်ပုံ စီးပွားရေးက တစ်ပုံ ပါဝင် ပတ်သတ်နေပါတယ်။ လေကြောင်းလိုင်းတွေကတော့ တတ်နိုင်သလောက် ငွေကို ချွေတာဖို့ ကြိုးစားမှာပဲလေ။ လေယာဉ်တစ်စီးကို ဆေးသုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်တဲ့ အခါ အနည်းဆုံး ၆၅ ဂါလံ လောက်ကုန်မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သင်လုပ်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါးနပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
အဖြူရောင် ဆိုတာက အခြေခံကျတယ်၊ ဈေးသက်သာတယ်၊ ရိုးရှင်းတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ သင့် လေယာဉ် ကို ခပ်လန်းလန်း လေးဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘာအရောင်ပဲသုံးသုံး တဖြည်းဖြည်း အရောင်လွင့်ပြီး အဖြူရောင်ပဲ ပြန်ဖြစ်သွားမှာ ကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ပိုတောက်ပပြီး ပိုကောင်းအောင် သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ဆေးတွေပိုကုန်မယ်၊ သိသာပါတယ်၊ ငွေပိုကုန်မယ်ပေါ့။
အဲ့ဒီတော့ အခြေခံကျတဲ့ အယူအဆ တစ်ခုေ်တာ့ရှိတယ်ဗျ။ ဘာဆေးမှ မသုတ်နဲ့။ လေယာဉ်ကိုယ်ထည် အကြမ်းထည် ကြီးနဲ့တင် တိမ်တွေကို ထိုးခွဲနိုင်တယ်တဲ့၊၊ အဲ့ဒီလိုပဲထားဖို့တွေးနေပြီလား? အဆင်မပြေနိုင်ဘူး ၊ အဲဒါဟာ ဆေးသုတ်ထားတာထက်စာရင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ် ပိုမိုကုန်ကျမှာ မို့ပါ။ ရွေးပေါ့ဗျာ။ ဘာတွေပဲ ရွေးချယ်ဖို့ ဖြစ်လာလာ အဖြူရောင် လေယာဉ်တွေ ကတော့ တခြားအရောင် ဒါမှမဟုတ် ဆေးမသုတ်ထားတဲ့ လေယာဉ်တွေထက်တော့ ပိုပြီး အရောင်းသွက်နေတာက အသေအချာပါပဲ။
Previous Previous post: ဘဝတစ်လျှောက်လုံး သမ္မတဖြစ်ခွင့် ရလာမယ့် တရုတ် သမ္မတ ရှီကျင်ဖျင့်
Next Next post: စိတ်ဖိစီးမှုတွေ သိပ်များနေရင် ရေများများသောက်ပါ
ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် နွေရာသီမှာ ရွေးချယ် တက်ရောက်လို့ရမယ့် သင်တန်းကျောင်းတွေ
တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ကတော့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့ကြရတော့ ကျောင်းသား/သူတွေလည်း အတော်ပင်ပန်းသွားကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်အပန်းပြေဖို့ ခရီးတွေထွက်၊ မုန့်တွေလိုက်စားရင်း ကောင်းကောင်းကြီး အနားယူသင့်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ဆက်ရဦးမယ့် ဘဝအတွက် အထောက်အပံ့ကောင်း ပေးနိုင်မယ့် ပညာရပ်တွေကို ကိုယ်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ် ဆည်းပူးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်…
Published: March 16, 20182:18 am Updated: February 20, 202010:15 am
Published: September 7, 20202:09 pm Updated: 2:15 pm